मध्यरातमा वडाध्यक्षको यो कस्तो धन्दा ? परे प्रहरीको फन्दामा? – Hamro24News
July 19, 2021 adminLeaveaComment on मध्यरातमा वडाध्यक्षको यो कस्तो धन्दा ? परे प्रहरीको फन्दामा?
काठमाडौ । कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै कानुनले वर्जित गरेको काममा संलग्न भएको अभियोगमा पक्रउ परेका छन् । पर्साको पकाहामैनपुर गाउँपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका छन् । उनी आइतवार राती पक्राउ परेका हुन् ।
उनलाई प्रहरीले मध्यरातमा वीरगन्ज महानगरपालिका–१९ बर्वास्थित सडक खण्डमा पक्राउ गरेको हो । ना१ब ३५९५ नम्बरको मोटरसाइकल जाँच गर्दा उनले कानुनले वर्जित गरेको बस्तु वोकेका देखिएपछि पक्राउ गरिएको हो ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
प्रहरी नायब उपरीक्षक ओमप्रकाश खनालका अनुसार पकाहामैनपुर गाउँपालिका–१ धोरे निवासी ५५ वर्षीय अमेरिका सहनीले चलाएको मोटरसाइकलको फिल्टर बक्सबाट खैरो हिरोइन फेला परेको हो । मोटरसाइकल वडाध्यक्ष आफैले चलाएका थिए ।
गाउँपालिकाको सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा यस्तो कानुनले वर्जित गरेको काम भएको हो । सहनी उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष हुन् । मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका सोही वडाका ५२ वर्षीय रामआदेश सहनीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनी वडाध्यक्षको मोटरसाइकलको पछाडी अर्को मोटरसाइकलमा सवार थिए ।
नेपाल रेलको ट्रयाकमा अहिले फुर्सतको बेला पाडापाडी चढ्दै, चर्दै । कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ? यस्तो छ हाम्रो देशको विकास: